कसरी खाने एन्टिबायोटिक औषधी ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ कसरी खाने एन्टिबायोटिक औषधी ?
कसरी खाने एन्टिबायोटिक औषधी ?
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७६ कात्तिक २१ गते, १५:४७ मा प्रकाशित
एन्टिबायोटिक एन्टी र बायोटिक दुई शब्दबाट बनेको हुन्छ । एन्टीको अर्थ बिरुद्ध र बायोटिकको अर्थ निकै सानो व्याक्टेरिया भन्ने हुन्छ । तसर्थ, व्याक्टेरियाको संक्रमणबाट बच्न एन्टिबायोटिक खुवाईन्छ । संक्रमण हुँदा चिकित्सको सुझाबमा धेरै बिरामीले एन्टिबायोटिक खान्छन् । तर, एन्टिबायोटिक खाने अवधिमा विशेष ध्यान दिएनौ भने यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा साईड इफेक्ट पनि गर्छ ।
चिकित्सकको सुझाबअनुसार मात्र एन्टिबायोटिक खानुपर्छ । चिकित्सकहरुले सामान्यतया दिनमा दुईदेखि तीन पटक एन्टिबायोटिक खुवाउने सुझाब दिन्छन् । आवश्यक भन्दाबढी खाँदा पाचन प्रणालीमा अशर गर्छ । त्यस्तै, औषधी बिचमा छोड्नु हुदैन । सामान्यतया खाना खाएपछि मात्र एन्टिबायोटिक खानुपर्छ । तर कतिपय अवस्थामा डाक्टरको सुझाबमा खानापछि वा अगाडि खान सकिन्छ । औषधी सेवनको अवधिमा चिल्लो, पिरो तथा गुलियो खानेकुरा खानुहुन्न ।
सामान्यतया एन्टिबायोटिक खाँदा शरिर कमजोर हुन्छ । तसर्थ बिरामीको अवस्था हेरी कमजोरीबाट बच्न चिकित्सकहरुल भिटामिन बी र क्याल्सियम सप्लिमेन्ट पनि खान सुझाब दिने गर्छन । एन्टिबायोटिक खाँदा आवश्यकता अनुसार पानी पनि पिउनुपर्छ । दैनिक कम्तिमा ३ लिनर पानी पिउनुपर्छ । शरिरलाई हाईड्रेड बनाईराख्न फलफुल तथा जुस खानुपर्छ ।औषधीले पाचन प्रणालीलाई अशर गर्ने भएकोले एन्टिबायोटिक खाएको समयमा पच्न सजिलो हुने र नुनिलो र चिल्लो खानेकुरा नखाने वा कम कम खानुपर्छ ।